Shir ballaaran oo ku saaban fidinta iyo taabagalinta waxbarashada Puntland oo Garowe lagu qabtay. – Radio Daljir
Shir ballaaran oo ku saaban fidinta iyo taabagalinta waxbarashada Puntland oo Garowe lagu qabtay.
Oktoobar 22, 2011 12:00 b 0
Garowe, Oct, 22 – Shirweyne ballaaran oo maantay lagu qabtay xarunta shirarka hotelka Naw-Rays Garowe ayaa waxaa lagu soo bandhigay barnaamij loogu magac daray hirgalinta iyo fidinta waxbarashada Puntland.
Shirkaan ayaa waxaa ka soo qayb-qaatay madax badan oo ka tirsan 2-da golle ee dawadda, saraakiil ka socotay hay’adaha Adra, iyo Relief International, iyo madaxda kale oo ka socotay hay’addo caalami ah.
Kulankaan ayaa waxaa si aad ah looga hadlay faa’iidada bulshada ku dhaqan deegaannada Puntland ay u leedahay fidinta waxbarashada, waxaana masuuliyiin u hadashay wasaaradda waxbarashadu ay sheegeen inay fursado waxbarasho oo gabdhaha dan-yarta ah ay ka haleen hay’addo ay ka mid tahay UNICEF, barnaamijkaaana uu qayb-ka yahay dadaallada iyo qorshaha ay wasaaraddu ku doonayso inay waxbarashada Puntland ku hormariso.
“Wasaaradda waxbarashadu waxay leedahay waaxda waxbarashada dad-ban, degmo kasta iyo tuulo kasta waxaa ka furan iskuullo bilaash ah oo wasaaraddu ugu talagashay inay ka faa’iidaystaan dhammaan dadka reer Puntland meel-kasta oo ay joogaan, miyi, tuulo, iyo magaalaba, waxaana ugu talagalnay inay wax ku bartaan dadka da’doodu u dhaxay 15-illaa 40-sano jir, waxaa mudan in la iswaydiiyo haddii bulshadii loo furay goobo waxabasho oo bilaash ah, miyaysan ahayn dadku inay tagaan goobahaasi oo ay waxbartaan” W/kuxiggeenka waxbarashada Puntland C/raxmaan Diiriye Carab ayaa sidaasi maantay sheegay.
Shirkaan maantay lagu qabtay magaalada Garowe ayaa ka qayb-ka ahaa barnaamijyo lagu hormarinayo heerarka waxabarashada Puntland, dhawaan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashada Puntland ay ku dhawaaqday inay samaysay sanduuq dhaqaale loogu arruurinayo ardayda dhamaysata dugsiyada sare ee Puntland si ay u helaan fursado waxbarasho oo dalka dibbadiisa ah.
Radio Daljir http://daljir.com/
Dawladda hoose ee Garowe oo maantay xirtay dhammaan gawaarida adeega bulshada ee PL-yada.
Dagaal ka dhacay Dayniile oo ay ku dhinteen 23 ruux, iyo dawladda oo sheegtay in ay la wareegtay.